သငျသညျအစဉျအမွဲကြားသိပါလိမ့်မယ်ဆုံးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သည် SAP လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ
5 ဇန်နဝါရီ 2017
SAP ဒီနေ့ရဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမငြိမ်သက်မှုများ၏ Focal Point သည်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း application programming အတွက်စျေးကွက်ရှေ့ဆောင်သည် SAP သင်တန်းအသင်းအဖွဲ့များတိုးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသစ်ဖွင့်လှစ်တံခါးများထုတ်လုပ်ရန်, မျက်နှာစာသဘာဝတရား၏ထိခိုက်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုတိုက်ဖျက်နှင့်အတိုက်အခံများ၏ရှေ့မှောက်၌ဆက်လက်တည်ရှိကူညီပေးသည်။
လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ, ညွှန်ကြားချက်စီမံကိန်းများနှင့် SAP အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ suite ကိုနှင့်အတူ - သင့်လုပ်သားအင်အားသူတို့သည်သင်တို့သည် SAP အစီအမံများ၏အင်အားကိုချဲ့ထွင်ရန်ရှိသည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ပေးပါ။ တစ်ခုပြည့်စုံစေ့စပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ် Make, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ web ပေါ်မှာများနှင့်ခရီးဆောင်သင်တန်းများနှင့်အတူအဆုံး clients များထိတွေ့ဆက်ဆံ - နှင့်သင့်အသင်းအဖွဲ့ကျော်နောက်ဆုံးထောက်ခံမှု programming နဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းရည်မှာ။ ဖြစ်နိုင်ဆုံးသောအံ့သြဖွယ် SAP သင်တန်းနှင့်လက်မှတ်အောက်မှာသတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်:
SAP SD က (အရောင်း & ဖြန့်ဖြူး) သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP စီမံကိန်းစနစ်များ (PS) သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP အခြေခံသင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP အခြေခံပညာ FICO သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP 01 Appliction သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP - ညနေသင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP - MM သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP - HCM သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP - Hana သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP - ကြိုတင် FICO သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP - ABAP သင်တန်း & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
SAP လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများ & လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
1 ။ SAP လက်မှတ်လျှောက်လွှာတွဲဘက် - အရောင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူး, ERP 6.0 EhP6 သင်တန်း
2 ။ SAP လက်မှတ်လျှောက်လွှာတွဲဘက် - SAP ERP 6.0 EHP4 သင်တန်းနှင့်အတူစီမံကိန်းစနစ်
3 ။ SAP အခြေခံသင်တန်း
4 ။ SAP အခြေခံပညာ FICO သင်တန်း
5 ။ SAP 01 လျှောက်လွှာသင်တန်း
6 ။ SAP - လေး - စက်ရုံကို Maintenance သင်တန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
7 ။ SAP MM - SAP ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေး
8 ။ SAP HCM - SAP လူ့ Capital ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ရေး
9 ။ SAP Hana သင်တန်း
10 ။ SAP - FICO ကြိုတင်လေ့ကျင့်ရေး
11 ။ SAP - ABAP သင်တန်း
SAP ERP အရောင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်အတိုင်းအတာတစ်ခုတစ်ခုလုံးကိုအပေးအယူစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြေပေးသည်။ ဒါဟာအညွှန်းစာကနေအစ, သင့် client များအားကောင်းသောညှိနှိုင်းရေးမှူး module တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်တောင်းဆိုမှုကိုနှင့် client ကိုအားသွင်းဆီသို့ဦးတည်အကွာအဝေးဆကျဆံ။ ဒါဟာခိုင်မြဲစွာ MM နှင့် PP utilitarian module တွေနှင့်အတူထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါဘွား, သူတို့ရဲ့ client ကိုအပေးအယူတန်ဖိုးကိုပါဝင်သည်ပွင့်လင်းတောင်းဆိုမှုများနှင့်ခန့်မှန်းချက်စစ်ဆေးသည်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများခွင့်ပြုထားသည်။
အဆိုပါ "အပေးအယူများနှင့်ဖြန့်ဖြူး, ERP 6.0 EhP6" လက်မှတ်စာမေးပွဲဖြေဆိုလျှောက်ထားသည့်ကျွမ်းကျင်သူပရိုဖိုင်းဘို့အရောင်းအမိန့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ပိုင်နက်အတွင်းသင်ယူမှုရှိကြောင်း check လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီအသေတမ်းစာဟာပြိုင်ဘက်ဒီကျွမ်းကျင်သူပရိုဖိုင်းအတွင်းတွင်အခြေခံ comprehension ရှိပါတယ်, နှင့်စီမံကိန်းများတွင်အခြေခံအားဖြင့်ဒီသင်ယူမှု execute နိုင်သည်ကိုပြသသည်။
အောင်မြင်မှုအာမခံရန်, SAP သင်တန်းမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုသင်သင်တန်းဖွင့်ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များလျှောက်ထားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်လိမ့်မယ်အဖြစ်သင့်လက်မှတ်စာမေးပွဲတွင်အဘို့အစီစဉ်မှညွှန်ကြားချက်သင်တန်းများနှင့်လက်တို့ကို-On ပါဝင်ပတ်သက်မှုပူးပေါင်းပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
သင်ကလက်မှတ်စမ်းသပ်မှု (အွန်လိုင်းစာရွက်စာတမ်းများမှသို့မဟုတ်မည်သည့် SAP မူဘောင်မရှိဝင်ပေါက်) ကြားတွင်မဆိုရည်ညွှန်းပစ္စည်းများအသုံးချခွင့်မရှိပါ။
ဤသည်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုစမ်းသပ်သည့်အကြောင်းသည် SAP ERP စီမံကိန်းစနစ်များ၏အကွာအဝေးအတွင်းအရည်အချင်းများနှင့်အလွန်အရေးပါသတင်းအချက်အလက်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာပြိုင်ဘက်ဒီအထူးကုပရိုဖိုင်းအထဲမှာတစ်လျောက်ပတ်သောယေဘုယျသဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းပြသ, ကာအောင်မြင်သောအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်အားလုံးရည်ရွယ်ဘို့ဤသင်ယူမှုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာထောက်ခံချက်အခြေခံသင်ယူမှုဝန်းကျင်ရှိပါတယ်မဟုတ်တဲ့တိကျတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တက်ခူးအပေါ်ချဲ့ထွင်။ ဒါဟာသင်ယူမှုအခြေခံသင်တန်းများအတွက်စုဆောင်းနှင့် commonsense မူဘောင်တှေ့ဆုံအားဖြင့်မွမ်းမံပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အောင်မြင်မှုအာမခံရန်, SAP သင်တန်းမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုသင်သင်တန်းဖွင့်ကောက်ယူထားသောအချက်အလက်များလျှောက်ထားရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်လိမ့်မယ်အဖြစ်သင့်လက်မှတ်စာမေးပွဲတွင်အဘို့အဆင်သင့်ရဖို့နားလည်ခြင်းအပေါ်မှာလက်-ညွှန်ကြားချက်သင်တန်းများနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်လုပ်မူဘောင်ကျော်အပြန်အလှန် အသုံးပြု. မရပါ crosswise ဖြစ် applications များလုပ်ပိုင်ခွင့်သောက hidden အခြေစိုက်စခန်းပေးသော middleware စီမံကိန်းများနှင့်တူရိယာတစ်ခုအစီအစဉ်။ SAP အခြေခံတဲ့ RDBMS, GUI ကိုများနှင့်ဖောက်သည် server ကိုအင်ဂျင်နီယာထည့်သွင်း။ အခြေခံ၏ interface ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအတိတ်တစ်ခုကိုဒါ့အပြင်တစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်အဘိဓာန်နှင့်ဒါ့အပြင် client ကိုများနှင့်မူဘောင်အဖွဲ့အစည်းကိုကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများထည့်သွင်း။ ရဝုဏ်သည် SAP မူဘောင်၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဒေတာဘေ့စများနှင့်ပြုပြင်မူဘောင်နှင့်အတူလျှောက်လွှာကိုဆက်သွယ်ပေးသော middleware ၏နည်းနည်းပါပဲ။ ရဝုဏ်အများဆုံးယေဘုယျသည် SAP ဖို့ GUI ကို interface ကိုနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသည်။
ဖှဲ့စညျးကောင်းစွာသိကျွမ်းခြင်းပညာသင်ယူခြင်းအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသောချမ်းသာ, ကိုယ်လက်တစ်ခုအောင်မြင်သောဆရာအားဖြင့် SAP FICO သင်တန်းအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ လိပ်စာတစ်ခုချင်းစီတစ်နာရီအလေ့အကျင့်လေးနာရီလည်းမရှိ။ Financials (FI) နှင့် Control (CO) ။
FI အကောင့် post မှကြွေးရှင် liabilities, ကြွေးမြီတောင်းဆိုမှုများနှင့်အထွေထွေစံချိန်, ထိုနည်းတူနည်းစနစ်ထည့်သွင်း, အနီးကပ်စာအုပ်များ, အဆင်သင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရ။ ပိုက်ဆံ related စာရင်းကိုင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုလေ့လာသည် SAP မှာတဦးတည်းသင်တန်းအဖြစ်ပညာတတ်နေကြတယ်
အဆိုပါ3နေ့ကပညာပေးသည် SAP နေဖြင့်အသုံးပြုသွားမည်အသုံးအနှုန်းအားရှင်းလင်းထားသည့်နေဖြင့်လေ့ကျင့်ရေးစတင်မောင်း - အလွန်အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်။ ကြောင်း nitty gritty သည် SAP courses.SAP 01 သည် SAP NetWeaver, SAP ERP, သည် SAP စီးပွားရေး Suite ၏အခြေခံကျသောအတွေးအခေါ်များ, စွမ်းရည်နှင့်အားသာချက်များကိုပြပိုပြီးအတွက်ထောက်ခံမှုများအတွက်အရေးကွီး၏သင်ယူခြင်းစံသည် SAP ကို ​​item တည်ဆောက်ခြင်းနေချိန်မှာဒါဟာ SAP ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအမံတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်ပေးသည် နှင့် SAP စီးပွားရေးထွက် sorting နှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် SAP အသုံးပြုမှုစီစဉ်အတွက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကူညီပေးနေ, အစီအစဉ်များ Objects ။
သည် SAP သင်တန်းသင်တန်းသည် SAP ERP အစိတ်အပိုင်းများအသုံးချဖို့အနည်းငယ်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများ (ESP ။ ECC6.0, BW) ထည့်သွင်း။ ဒါဟာထိုနည်းတူအပိုအစိတ်အပိုင်းများကိုပြသသည်။
သင်တန်းဒါ့အပြင်အတွေးသို့ ERP ဖြန့်ချိ R ကို /34.6C နှင့် SAP R ကို /3လုပ်ငန်းများ၏ဒြပ်စင်ကြာသောသင်၏မှတ်ချက်ကိုယူလျှင်၎င်းသည်စံပြဖြစ်လိမ့်မည်။
တတ်ကျွမ်းစက်ရုံ upkeep ယင်း၏ဖန်ဆင်းခြင်းပုံစံများကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ရောနှောနေခြင်းမှအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့စွမ်းရည်မှအလွန်အရေးပါသည်။ SAP ရဲ့ R ကို /3မူဘောင်, အစက်ရုံကို Maintenance (လေး) ၏ဆွဲဆောင်မှုအသုံးပြုမှုနှင့်အသုံးချအသုံးချဖို့အဖွဲ့အစည်းများအဘို့အစိတျအပိုငျးအထင်ကြီးအလားအလာအားသာချက်များနှင့်အတူနေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှပြော၏။ ဤသည် pm တွင်လေ့ကျင့်ရေးကဒီနည်းနည်းသေးရှုပ်ထွေးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့တွေကမှားစရာဖှငျ့နိဒါနျးကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဝန်ကြီးချုပ် actualizing များအတွက်အလွန်အားဆင်းမြေကြီးတပြင်လက်စွဲကိုပေးသည်။
သော့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံများကိုအခြေခံ pm တွင်အသုံးဝင်မှုတစ်ခုစာမေးပွဲနှင့်အတူစတင်ခြင်း, ဒီ pm တွင်သင်တန်းစီစဉ်ပံ့ပိုးမှုနဲ့ R /3အတွက်သေဒဏ်စီရင်သူအပေါင်းတို့ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းရန်ရှေ့သို့တတ်၏။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ပုံမှန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစီးနှင့်အတူစက်ရုံထောက်ခံမှုထည့်သွင်းအားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည် SAP သင်တန်းပူးတှဲစက်ရုံကို Maintenance သင်တန်းများ propelled များအတွက်အခြေခံမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်: PLM305, PLM310, PLM315, PLM318 နှင့် PLM320
SAP MM Module လုံးဝသည် SAP R ကို /3မူဘောင်အတွင်းကွဲပြားခြားနားသော module တွေနှင့်အတူထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်, ဥပမာ, ဘဏ္ဍာရေး (FI), (CO) ထိန်းချုပ်ခြင်း, အရောင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှု (SD) နှင့်အခြားသူများ။ ပစ္စည်းများ, ထိန်းချုပ်စီစဉ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှု, ဝယ်, ထုတ်ကုန်လာပြီ, စတော့ရှယ်ယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းလက်မှတ် - ဒါဟာ SAP ပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါငျးတို့သကာလအထောက်အပံ့ပေးတယ်။
Enable အတွက်ဆွဲ, သင်၏စွမ်းရည်ကိုတည်ဆောက် - SAP SuccessFactors ကနေလူသားအရင်းအနှီးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ (HCM) ပရိုဂရမ်းမင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ cloud-based လူ့ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်များကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, Multi-မျိုးဆက်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုအားကောင်း,, မမြင်နိုင်တဲ့လုပ်အား။ onboard, လုပ်သားအင်အားဘွတ်ကင်, ဘဏ္ဍာရေး, နှင့်ကောင်းကင်ပြာများအတွက် communitarian devices တွေကိုအသုံးချအဲဒီမှာကနေကန့်သတ်သည်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ပိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ceaseless သင်ယူမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်သူတိုးတက်မှုတစ်ခုယဉ်ကျေးမှုအားပေးအကြောင်းကိုလာပါတယ်။
SAP Hana analytics နှင့် application များအတွက်လွှဲအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ဇာတ်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားသတင်းအချက်အလက်, prescient စွမ်းရည်နဲ့ content သတ္တုတူးဖော်ရေးစွမ်းရည်ကိုကိုင်တွယ်ရန်စွမ်းရည်, ကြီးမားပြင်ဆင်နေမြန်နှုန်း: အအိုင်တီ stack တိုးတက်အောင်နေစဉ်, ကတူနိုင်စွမ်းအစိတ်အပိုင်းများကိုပေးသည်။
နှောင့်အယှက်မရှိဘဲမြေကြီးတပြင်ချိုးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသိရှိစေရန်ထိရောက်သောတည်ထောင်ခြင်း - SAP Hana အစီအစဉ်များ၏အခြားခေတ်ထုတ်လုပ်ဖို့စင်မြင့်ကိုပေးတော်မူ၏။
SAP Hana စဉ်ဆက်မပြတ် applications များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော analytics ဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်ဖန်တီးခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းအဘို့အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ expository ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အချက်အလက်များ၏များပြားလှသောပမာဏစုဆောင်းစတင်ခဲ့ပြီးထက်အများကြီးရှိရာသို့အလျင်အမြန်, အင်ဂျင်နီယာများ CPU ကိုမှသတင်းအချက်အလက်ရွေ့လျား, အလားအလာမြန်နှုန်းနှင့်အတူတစ်စမ်းသပ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသဘောပေါက်လာတယ်။ Hard Disk ကို Drives လုံလုံလောက်လောက်အမြန်တကယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သေးတစ်ချိန်တည်းမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း။ လက်ရှိတွင်သည် SAP နှင့်အတူ Hana လေ့ဓလေ့ထုံးတမ်းခက်ခဲစက်ဝိုင်း drives တွေကိုနှင့်အတူထုတ်လုပ်ရန်ညာဘက် 24 နာရီဝန်းကျင်ကိုယူမယ့်အစီရင်ခံစာအတိအကျတခဏမဟုတ်ကြာပါသည်။
ဖှဲ့စညျးကောင်းစွာသိကျွမ်းခြင်းပညာသင်ယူခြင်းအပေါ်တစ်ဦးထက်ပိုသောချမ်းသာ, ကိုယ်လက်တစ်ခုအောင်မြင်သောပညာပေးခွငျးအားဖွငျ့သည် SAP FICO သင်တန်းအမိန့်ပေးခဲ့သည်။ လိပ်စာတစ်ခုချင်းစီတစ်နာရီအလေ့အကျင့်လေးနာရီလည်းမရှိ။ Financials (FI) နှင့် Control (CO) - သည် SAP FICO module တစ်ခုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ပိုက်ဆံ related မှတ်တမ်းများကို run ဖို့မျှော်လင့်ထားသည့်အသုံးဝင်မှုများစွာ2မှတ်သားဖွယ်ခွဲခြားမှုထည့်သွင်း။
FI ကြွေးရှင် liabilities, ကြွေးမြီတောင်းဆိုမှုများနှင့်အထွေထွေစံချိန်, အကောင့် post မှထိုနည်းတူနည်းလမ်းများ, အနီးကပ်စာအုပ်များ, အဆင်သင့်ပိုက်ဆံ related ရှင်းလင်းချက်များနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအစီရင်ခံစာအရထည့်သွင်း။
အဆင့်မြင့်စီးပွားရေး Application Programming (ABAP) သည် SAP (စနစ်များ, လျှောက်လွှာနှင့်ထုတ်ကုန်များ) R ကို /3မူဘောင်တစ်ခုယေဘုယျအားမိတ်ဆက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှောက်လွှာ subsystem သို့အဘို့အပလီကေးရှင်းများဖန်တီးနေတဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းစကားဖြစ်ပါတယ်။ ABAP ခွအေနမြေား programming ကိုဆန္ဒပြရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်ကြားရေးအဓိပ္ပာယ် (metadata ကို) ကို ABAP အဘိဓါန် လုပ်. ကြီးကြပ်လျက်ရှိသည်။ အဆိုပါ ABAP အဘိဓါန်လေ့လာပြီးမပါဘဲမူဘောင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်အချက်အလက်များ၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအရေအတွက်တစ်ဦး focal ပုံဖော်တင်ဆက်ခွင့်ပြုပါတယ်။ နယူးသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲဒေတာအားလုံးဘောင်အစိတ်အပိုင်းများအကျိုးဆက်နေရာချပေးသည်။ ဤအချက်အလက်လေးစားမှု, သတင်းအချက်အလက်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးအတွက်အာမခံပါသည်။
ဇယားအဆိုပါဒေတာဘေ့စ၏အ ABAP အဘိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိပါသည်။ အလားတူဖွဲ့စည်းပုံရှိခြင်းတစ်ဦးကစားပွဲထို့နောက်ဝှက်ထားသောဒေတာဘေ့စ၌ဤစားပွဲပေါ်မှာချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ABAP အဘိဓါန်တစ်ဦးကစားပွဲနှင့်အဓိပ္ပါယ်ပူးတွဲအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်:
စားပွဲတင်လယ်ကွင်း table ထဲမှာပါရှိသောလယ်ကွင်း၏လယ်ပြင်အမည်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်အမြိုးမြိုးသွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။
အထူးပြု settings ကိုဘယ်လိုစားပွဲ database တွင်လုပ်ရမည််၏ထိန်းချုပ်ထားသည်။